Ankoatra ny raharaha Augustin Andriamananoro, izay vao nivaly ny 26 desambra teo ny fitsarana azy, dia nanakoako ihany koa ny mikasika ny raharaha Lylison, izay efa niatomboka tamin’ny volana jona. Raharaha nalaza ho niampangana ity loholona ity voalohany, raha tsiahivina, ny fitarihana olona hanao tanàna maty sy fanonganam-panjakana noheverina fa anton’ny fidinana an-dalambe notarihany teny amin’ny fasan’ny Maherifo Avaratrankatso ny 29 martsa teo, nandritry ny fahatsiarovana ireo mpitolona tamin’ny taona 1947. Teo koa ny asa fampihorohoroana nitranga tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina nandritry ny fankalazana ny fetim-pirenena, ny alin’ny 26 jona. Hatramin’izao dia mbola karohina ny loholona Lylison René de Rolland. Ny volana septambra teo koa no nisiana fisavana ny tranon’ny depiote Nina, anisan’ny mpikambana ao anatin’ny MAPAR ihany koa, noho ny nanakorontanana sy nandratrana ireo efa-dahy taizany. Teo koa ny daroka nihatra tamin’ny loholona sareraka tamin’ny volana novambra. Nanamarika ny tantaran’izy ireo tamin’ity taona ity kosa ny fahafahana madiodio nomena an’Andriamananoro.